News Collection: स्वास्नी नेपालमा, लोग्ने विदेशमा ‘फलानी’सँग
नेपालमा राजनीतिक व्यवस्थाहरु परिवर्तन भए, नेताहरुको जीवन स्तर सुध्रियो तर सामान्य जनतालाई त्यसले केही पनि असर गरेन। हिजो पनि उस्तै, आज पनि उस्तै। नेपालीहरुलाई रोजगारीको अवसर पाउन विदेश जानु पर्ने बाध्यता भयो। पछिल्ला वर्षहरुमा लाखौँ नेपाली विदेशिएका छन्। देशको अर्थव्यवस्थालाई मध्यपूर्वमा रोजगारी गरिरहेका लाखौँ नेपालीहरुको रेमिट्यान्सले ठूलो योगदान गरेका छन्। तर रेमिट्यान्सको पैसासँग मात्र यो सम्बन्धित छैन। यसले कयौँ सामाजिक समस्या पनि निम्त्याएका छन्। पति विदेशिएका पत्‍नीहरु नेपालमा ‘बिग्रिएका’ कयौँ प्रतिनिधि खबरहरु पत्रपत्रिकामा आइरहन्छन्। तर के विदेशिएका पतिहरु चाहिँ सँधै चोख्खै रहन्छन् त ? कसरी टुट्दैछ परिवार, परम्परागत मान्यता- युएईबाट खेमनाथ पौडेलले सुनाएको अनुभव पढ्नुस्, विदेशिएका पतिहरु पनि ‘बाहरवाली’सँग कसरी सल्किएका हुन्छन्।
• यूएईका नेपाली भेटिने प्रत्येक पार्कमा आजकल जोडी बिनाका नेपालीहरु प्रायः कमै हुन्छन्। हेर्दा विवाहित लाग्ने महिलाहरु पनि खुल्लमखुल्ला अंगालो हालेर गफ छाँट्दै छाडा भइरहेका हुन्छन्।
• “के गर्ने हजुर प्रवासमा आएको ८ वर्ष भयो। जवानी कति सुकाएर बस्ने ? वर्षको १ महिना विदा हुन्छ। नेपाल जाँदा त्यतिकै समय बित्छ। प्रवासमा ‘बाहरवाली’ नबनाए त यो जवानी त्यतिकै खेर जाने भयो नि। बाध्यता,” उनले सुनाए।
• फेसबुकबाट एक जना चितवनका साथीले काठमाडौँकी रैथाने केटीलाई साथी बनाए। घरमा श्रीमती तथा छोरा हुँदाहुँदै पनि उनी ती केटीसँग यति नजिक भए कि कम्पनीबाट १५ दिनको विदा मिलाएर नेपाल गए। आउँदा क्यामेरामा अश्लील फोटाहरु देखाउँदै भने, यसपालिको जस्तो मज्जा कहिल्यै भएन। उनी घर हैन नगरकोटको होटलमा रात बिताएर फर्केका रहेछन्।
• अहिले प्रवासिएका प्रायः नेपालीहरु बाहरवालीको खोजीमा बढी तल्लिन रहन्छन्। वर्ष दिनमा विदामा जानु पर्ने भएतापनि बाहरवालीले मन बुझाएपछि घर फर्कन पनि कतिपयले क्यान्सिल गरेको पनि देखिएको छ।
घरवाली नेपालमा बाहरवाली प्रवासमा